Hidha Abbayyaa: 'Itoophiyaan wixinee hidha Abbayyaa Masirii kuffifte' - BBC News Afaan Oromoo
Hidha Abbayyaa: 'Itoophiyaan wixinee hidha Abbayyaa Masirii kuffifte'
"Dhimmi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa nuyif dhimma teknikaa malee dhimma siyaasaa miti" jedhan Ministirri Bishaan, Jallisii fi Aanniisaa Injinar Silashii Baqqalaa.
Miidiyaalen biyya Masrii dhimmicha gara hin taanetti oofaa jiru jechuunis ministirrichi ibsa miidiyaalef laatanin himan.
Bara darbe Fulbaanarratti mariin Itoophiyaatti taasifamee turullee rakkoo siyaasaa Sudaan keessatti uummamerraan kan ka'e marichi yeroosaa eeggatee adeemsifamuu akka hin dandeenye Injinar Silashiin dubbatan.
Haa ta'u malee Ijiipt gidduudhaan Hagayya 01 bara 2019 wixinee mataashee qopheeffattee dhufte jedhan.
Ejjeennoon Sudaan hidha Haaromsaarratti jijjiiramaa laata?
Pirojektii Hidha Haaromsaa du'a Injinar Simanyaw booda
"Kun immoo haala kana dura biyyoonni sadeen waliin itti mari'achaa turanin ala waan ta'eef adeemsichi sirrii akka hin taane itti himnee wixinicha hin fudhanne" jedhan.
Yaadni ministirootni bishaanii fi ministirootni dhimma alaa biyyoonni sadeeni wal agarree yaa mari'annu kan jedhus akka hin fudhannee fi ministirootni bishaani fi gareewwan teknikaa biyyoota sadeenii wal arguu akka qaban xalayaa itti ergine jedhan.
Kanuma bu'ureeffachuun gara Ijipt deemamuusaas himan.
"Biyyi tokko qofaasaatti wixinee dhiyeessuu akka hin dandeenyee fi Sudaan ministirashee akka muuddu eegu qabna kan jedhu itti himne" jedhan Injiiner Silashiin.
"Sana boodas Fulbaana afurii fi shan mariin Masrii Kaayirootti ministiroota biyyoota sadanii hirmaachise taasifameera" jedhan.
Walgahichi Masrii magaala Kaayirootti gaggeeffames haala kanaan dura hin turreen kan yaadonni babal'aan irratti dhiyaatanii fi falmiin itti taasifame ta'uu dubbatan.
Masrii wixineen ishee ishee akka ilaalaamuf gaafatulle fudhatama akka hin argannee fi haala marichi gara fulduraatti itti fufu irratti waliigalteerra gahamuusaa Injinar Silashiin himaniiru.
Goodayyaa suuraa Ministirri Bishaan, Jallisii fi Aanniisaa Injinar Silashii Baqqalaa dhimma hidha Abbayyaa irratti miidiyaaleef ibsa yoo kennan.
Ka'umsi marii biyyoota sadeeni sadarkaa hojii koreen saayinsii fi qorannoo bilisaa biyyaalee sadeenii, bara darbe irra ture fi dhimmoota ministiroota biyyaalee kanneeniif dhiyeessaa turerraa akka itti fufu himan.
Haala guutinsa hidhichaa irratti yaada fooyya'iinsaa ministirootni biyyoota sadanii Fulbaana 25 bara darbe dhiyeessan kan bu'ureeffate akka ta'u himan.
Akkasumas sadarkaa sadaffaatti akkuma Masrii wixinee dhiyeessite Itoophiyaa fi Sudaanis wixinee isaani akka dhiyeessan waliigalanii gargar bahuu dubbatan.
Hojii gaggeessaa haaraan hidha haaromsaa guddichaa Injiiner Kiflee Horroo eenyu?
Rakkoolee laga Abbayyaa mudatan
Wixineewwan biyyaalee sadanii kan ajandaawwan ijoo shan of keessaa qaban kunneenis koreen saayinsii fi qorannoo bilisaa Fulbaana 19 hanga 22ti akka ilaalu itti aansunis ministirootni bishaanii biyyaalee lamaanii guyyoota lamaaf ni mari'atu jedhan.
"Kanaan dura mariiwwan sadi ykn afur taasifnee bu'aa gaarirra geenyee ture" kan jedhan injinar Silashiin "wixineen Masiriin dhiyeessite garuu rakkoo qaba" jedhan.
Biyyoota yaa'a gadii ilaalcha keessa osoo hin galchin hidhicha wagga lama keessatti guutuun ni danda'ama kan jedhan ministirichi, akkaataa dizaayinii projektichaan immoo waggoota sadi keessatti guutuun akka danda'amu himan.
Hidhawwan gurguddoon akka hidha haaromsaa saffisaan yoo guutaman dhiibbaan bishaanichaa hidhicha waan miidhuf suuta jedhee guuttamuu qaba jedhan.
Kunis haala roobaa irratti hundaa'un waggoota afurii hanga torbaatti fudhachuu danda'a jedhan.
Wixinee Haaraa Masirii
Masiriin hidhi Abayyaa osoo walirraa hin citiin waggaa waggaan bishaan metir kiyuubi billiyoona 40 akka gadhiisu barbaaddi.
"Kun immoo sirrii miti. Fedhii misoomaa keenya gara fulduraa fi Sudaanis bishaan hagasii akka dabarsituf kan dirqisiisu waan ta'eef waliigaltee akkasii hin fudhannu" jechuun dubbatan.
"Dabalataan Masirii kuufamni bishaanii hidhashee Aswaan jedhamu meetira 165 irraa akka gadi hin buune, yoo bu'es hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa bishaan akka gadhiisuuf barbaaddi.
Masirii bishaan qusachuuf jecha ruuzii alaa galchuufi
Kunis kan irratti waliigallu miti. Itti fayyadamni bishaani hidha Aswaan gadi jiru maal akka fakkaatu waan hin beekneef akkasumas fedhiin misoomaa keenya gara fulduraas waan jiruuf gaafifin akkanaa sirrii miti" jedhan Injinar Silashin.
Nuyis yaada Masir dhiyeessite kanaaf deebi ittisaa karaa saayinsaawaa ta'een ni qopheessinas jedhan.
Akka biyaatti dhimmi kun dhimma teknikaa malee dhimma siyaasaa miti jechuun kan dubbatan ministirri Bishaan, Jallisii fi Aanniisaa Injinar Silashii Baqqalaa "marii keenya hanga ammaatin bu'aan heddu argameera.
Iftoomina uumuu keenyaanis walitti bu'iinsa hin barbaachisne hambisneerra" jedhan.
Marii Gara Fulduraa
"Wixineen Masiriin dhiyeessite adeemsarraa kan foxxoqe qofa osoo hin taane dhimma hidha biyya biraa irratti murtee ofii kennuuti" kan jedhan ministirri bishaan, jallisii fi anniisaa Injinar Silashii Baqqala "gara daandiitti deebi'aa, yaa mari'annu, lakkoofsarra waliigalteerra gahuu dandeenya jenneeni jirra" jedhan.
Kana malees dhimma hojimaata yeroo dheeraa hidhichaa dhaabbileetu hojjeta malee eksipartiin Masirii Abbayyaarra taa'ee to'achuu hin danda'u. Kun dhimma birmadummaa biyya tokko miidhu dha" jechuunis himan.
"Biyya biraatin hin ajajamnu haa ta'u malee waliigalteewwan ni taasifna akkaataa waliigalleenis ni hojjenna" jedhan.
Dhimmooti akkanaa battalumatti kuffisna kan jedhan ministirichi haala faayidaa biyyaa eegsisun mari'annee kan ta'u fudhachuu fi kan hin taane immoo ni kuffisna jedhan. Dabalataan wixinee keenya ni dhiyeeffannas jedhan.
Hidhni Haaromsaa Maalirra Jira?
"Karoora amma qabnun waqtii roobaa itti aanutti bishaan kuusuu eegallee Mudde bara 2013ti tarbaayinoota lamaan anniisaa elektriikii maddisiisuu ni eegalla" jedhan ministirri bishaan, jallisii fi anniisaa Injinar Silashii Baqqala.
"Karoorri kun saffisuus harkifachuus ni danda'a kan jedhan Injinar Silashiin hanga ammatti garuu wanti duubatti harkifate hin jiru" jedhan.
Ijaarsi waliigalaa ijaarsa hidhichaas dhibbeentaa 68.7 ta'uutu himama.
Rakkoolee laga Abbayyaa: Haroo Xaanaa gara hidha guddichaatti
16 Onkololeessa 2017
Viidiyoo Qabsoo humna laga Abbayyaa
Hidha Haaromsaa: Ijaarsi hidha haaromsaa guddichaa harkifate
16 Elba 2019
Hidha Haaromsaa: Hojiin elektiroo - mekaanikaalaa MetEC irraa fuudhamuun kaampaanota biroof kenname
14 Muddee 2018
Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa: Du'a Injinar Simanyaw booda
'Tokkummaan keessoo fi rifoormii Paartichaa ajandaa ijoodha'
Rifarandamiin Sidaamaa guyyaa 10'n achi siiqe
Daddabarsa seeraan alaa dhala namaa ittisuuf seerri haaraan bahuuf
Tarkiin waamicha Ameerikaa dhukaasa dhaabi jedhu didde